Whisker Menu: Otu esi eme ka odidi ya di na isiokwu anyị | Site na Linux
Whisker Menu: gbanwee ọdịdị ya na isiokwu GTK anyị na Xfce
Rayonant | | Ọdịdị / Nhazi
Ogologo oge ka m na-eji Nchịkọta Whisker dị ka m menu na panel Xfce Agbanyeghị mgbanwe nkesa m, agbanyeghị n'oge na-adịbeghị anya, m ga-anọ ọtụtụ awa n'ihu igwe nyocha n'abalị ma ọ masịrị m na agba nke ihe m na-eji eme ihe dị ọtụtụ.
Na mbu echere m na Whisker esoghi / iji isiokwu m gtk, ma achọpụtara m site n'okwu onye kere ya nke a na-emeso dị ka windo mgbe niile ma ọ bụ nke nkịtị (Ọ nweghị ike ịbụ Gtk Menu n'ihi Wijetị ọ na-eji akpata nsogbu) yabụ ọ bụrụ na ọ na-agbaso agba nke isiokwu ahụ, mana nke windo ahụ, ọ bụghị ndị kwekọrọ na menu:
Whisker Menu bụ windo mgbe niile yana ya dakọtara isiokwu GTK nke windo mgbe niile. Ọ nwere ike ghara ịbụ a GtkMenu n'ihi wijetị ọ na-eji (kwere m, m na-agbalị), n'ihi ya, ọ adabaghị theming nke menus
Mana n'ebe ahụ ka Graeme kọwara etu esi eme nke a n'ụzọ dị mfe site na ndozi na faịlụ ahụ .gtkrc-2.0.
Cheta na ọ bụ faịlụ zoro ezo (Ctrl + h o Alt+. iji gosipụta ha) nwere ike ọ gaghị adị na ndekọ aha eachlọ onye ọrụ ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụ naanị mepụta ya
N'okwu m, esi m na nke a pụọ:
Whisker Menu na ndabara
Gbanwee Whisker Menu
Emere m ya dị ka ihe o kwuru na peeji ahụ e kwuru n'elu, koodu na-esonụ na-agbanwe nri ma ọ bụ ngalaba edemede na menu. bg na-ezo aka n’azụ, na fg gaa n'ihu, n'ọnọdụ ndị a ka ederede ederede. Ihe 3 kwuru NORMAL, Ọrụ y IHU ha na-ezo aka na ndị ahọpụtaghị, ahọrọ ma họrọ steeti n'otu n'otu mana ọ bụghị cursor na ya.
Aha ụdị ndị ahụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ịchọrọ ma ọ bụrụhaala na aha wijetị ziri ezi, na nke m dịka ị nwere ike ịhụ, m na-eji aha ndị na-enyere m aka ịmata akụkụ nke menu ọ bụ
Tọọ agba maka Whisker Menu
Ọ bụ ezie na nke a na-agbanwe ogwe aka ekpe ma ọ bụ lee ihe ndị ahụ:
N'ikpeazụ, nke a gbanwere ọdịdị nke igbe ntinye / ọchụchọ:
Agba ndị ahụ bụ n'ezie "ihe ndị na-eri ya", yabụ megharịa ha dịka mkpa gị si dị. Maka mgbanwe ndị a iji rụọ ọrụ ọ dị mkpa imechi nnọkọ ahụ wee banye ọzọ, agbanyeghị ọ bụrụ na ịchọrọ izere nsogbu ahụ ma ọ bụ nwee ihe ndị dị mkpa meghere ị nwere ike ịmalitegharị Xfce panel na xfce4-panel -r
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Whisker Menu: gbanwee ọdịdị ya na isiokwu GTK anyị na Xfce
Kedu ụdị edemede ị jiri mgbe ị na-ewere screenshots ndị ahụ?
Ọ bụ ekele 😀
Font m ji sistemụ m bụ Candara.
Candara? Uff, ọ ka mma a ukwuu ..
O yiri ka ọ bụ Aller .. M na-ekwu, ọ dị ka ọ dị.
Ọ bụrụ na ọ sịghị na ọ bụ Candara, m ga-eche na ọ bụ Aller Hahaha
mara mma !!! Enwere m mmasị na menu nkpirisi ahụ dị na Xubuntu m, ... nwere ekele dị ukwuu !!! .. Enwere m olileanya ma gaa n'ihu na-enye anyị ọtụtụ ihe maka XFCE
Agbalịrị m ime ya na agbanweghị m ihe ọ bụla 🙁 Amaghị m ihe m na-eme, faịlụ ahụ apụtaghị na mbido mana ugbu a m bidoghachiri igwe ahụ ọ pụtara, ugbu a enwere m abụọ .gtkrc -2-0 enwere ike ịgwa m otu esi eme ya nke ọma?
M tinye ihe oyiyi nke menu: http://imgur.com/EZLEtm9
Aha faịlụ ahụ ezighi ezi, ọ kwesịrị ịbụ .gtkrc-2.0, nyegharịa ya wee pụọ ma ọ bụ malitegharịa panel ahụ m kwuru n'isiokwu ahụ ma gwa m.
Daalụ nke ukwuu! Ọ dị njikere, enwere m ekele maka nkọwa a 😀
N'ụlọ m enweghị .gtkrc-2.0, ihe m mere bụ ịmepụta ya ma rụọ ọrụ.
Daalụ, ezigbo ọnụ
Ezigbo ego na Whisker Menu. Amaghị m na wijetị a na-akpasu iwe n'ezie.
Na-amasị m na anya gị wiska, ihe akara ngosi isiokwu ị na-eji?
Isiokwu Oyiyi bu Numix Circle.
Nke a na-enye m nsogbu n'obi ogologo oge. Daalụ maka ịkekọrịta 🙂
Ugbu a Xubuntu m dị mma nke ukwuu.
Zaghachi na Ntughari
ma candara adịghị na ebe nchekwa n'efu !!
Richard anabataghị isi iyi a !! Nke a abụghị nnwere onwe, ọ bụ ịkwa iko !!
hi, enyemaka pls ihe niile na-arụ ọrụ m ma e wezụga nke a:
ịke «Black TreeNumix»
isi [NORMAL] = "# 2D2D2D"
isi [na-arụ ọrụ] = "# D64937"
ederede [NORMAL] = "#ccc"
ederede [ỌR]] = "#fff"
wijetị «whiskermenu-window * TreeView *» style «Black TreeNumix»
nke ahụ bụ, ọ na-agbanwe ihe niile belụsọ ọcha nke ndabere:
Youbanyelarị ma ọ bụ malitegharịa panel ahụ? . Hụkwa na nhota ị na-eji bụ nkwupụta kwụ ọtọ na ọ bụghị ederede ederede.
mba, emegoro m ya, nsogbu di na isiokwu gtk, a gha m ahọrọ na isiokwu gtk na isiokwu windo bu otu, ma ghara ichikota ha, ekele 😉
Daalụ nke ukwuu Rayonant! Yabụ Whisker ka mma
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ihu were Redshift.
Redshift na-arụ ọrụ ebube
Ọdịdị ahụ dị ịtụnanya. Echere m na m arụ ọrụ na nke m hahaha.
Enwetara m nke a n'onwe m site na nnwale na njehie, mana eziokwu adịghị mma dị ka gị (ikwu eziokwu, ọ dị njọ).
Ọ ga-amasị m ịhapụ ya dị ka ọ dị na mbụ mana echetaghị m ihe ụkpụrụ ndabara bụ ...
nye m aka na ọnọdụ a biko ...
AKPANKPỌ. Daalụ maka onyinye ahụ.
Zaghachi daniel sancho
SquidGuard: Gbochie ibe ya na ọdịnaya okenye na Arch, Manjaro ..
Wayland na ndabara na Fedora ga-egbu oge, ebe Centos 7 nwere RC